Al-Shabab oo mar kale meel fagaare ah ku toogatay dad shacab ah + Magacyada - Caasimada Online
Home Warar Al-Shabab oo mar kale meel fagaare ah ku toogatay dad shacab ah...
Al-Shabab oo mar kale meel fagaare ah ku toogatay dad shacab ah + Magacyada
Kismaayo (Caasimada Online) – Al-Shabaab ayaa markale shalay gelinkii dambe goob fagaare ah oo ku taalla deegaanka Kamsuuma oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya ku toogtay laba nin oo ay u soo jeediyeen eedeymo kala duwan.
Labada nin ayaa waxaa magacyadooda lagu kala sheegay Cabdullaahi Ooyow Mayaane oo 20 jir ahaa iyo Cabdullaahi Maxamad Faarax oo isna ahaa 24 sano jir.
Ooyow ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu faraxumeeyey wiil 5 sano jir ahaa, halka Cabdullaahi Maxamed ay Al-Shabaan ku eedeysay inuu ka tirsanaa ciidamada Jubbaland.
Ma jiro illaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca Jubbaland oo ku aadan toogashada askarigaas oo ay Al-Shabaab sheegtay inuu ka tirsanaa maamulkaasi.
Maalin ka hor ayey markii ay kooxda Al-Shabaab labo ruux ay ku toogatay degmada Jamaame ee isla gobolka Jubbada Hoose, waxaana ay ku eedeeyeen inuu mid ka mida ahaa Sixiroole, kan kale uu ahaa askari ka tirsanaa ciidamada ammaanka Jubbaland.